दात किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार, एक सातामै छुट्कारा पाउनुहुने छ (भिडियो सहित) -
काठमाडौँ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु दातको समस्याबाट ग्रसित छन् ।
कसरी अपनाउने घरेलु उपाय भिडियोमा हेर्नुहोस
Mon-Apr-2018, 02:24 am मा प्रकाशित, 200 जनाले हेर्नुभयो
साम्राज्ञीलाई कस्ले गर्‍यो यस्तो व्यवहार ? रुदै आइन मिडियामा !!! गरिन यस्तो खुलासा भिडियो हेर्नुहोस